Phila impilo ngaphandle kwemingcele - Ipulatifomu Yesineke Yomhlaba Wonke Yomoya Nemikhuba Yomoya
Ikhaya>Phila impilo ngaphandle kwemingcele
Yiziphi ezinye izinhlobo ze-asthma ezikhona?
Kukhona uhlobo olwaziwa ngokuthi 'i-asthma enamandla'. Njengoba kuzwakala, abantu abaphila nesifo somoya esibucayi babhekana nezimpawu eziwohloka njalo futhi ezinzima, noma ngabe belashwa ngemithi yokulawula umthamo omkhulu.
Udokotela noma uchwepheshe uzokwazi ukukutshela uma i-asthma yakho inzima, futhi akusize wehlise izimpawu nomthelela wazo empilweni yakho uma kunjalo.
Thola ukuthi yini ongayilindela ekuphathweni kwesifuba somoya esibi.
Singakusiza ufunde kabanzi ngesifuba somoya esibucayi, ilungelo lakho lokwelashwa nokuthi ungayithola kanjani inhlangano yangakini yesiguli.
Beka phezulu ku- Chaza Isifuba Sakho Somoya ikhasi ku-Facebook bese ujoyina ingxoxo ekuphatheni isimo sakho.
Chaza i-Asthma yakho iholwa futhi iqondiswe yi-Global Allergy and Airways Patient Platform (GAAPP) ngokubambisana nezinhlangano ezingamalungu abo. Lo mkhankaso usekelwa yi-GSK, ngosizo lwenhlangano ezimele yezokuxhumana kanye nesibonelelo semfundo.